Tinder Dating App ကနေ အကောငျ့ဖယျရှားခံရတဲ့ အသကျ၂၁ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးရဲ့အဖွဈ။ – SoShwe
Home/LifeStyle/Tinder Dating App ကနေ အကောငျ့ဖယျရှားခံရတဲ့ အသကျ၂၁ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးရဲ့အဖွဈ။
So Shwe November 29, 2021	LifeStyle Leaveacomment
လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈအုပျခြုပျရေးမှူးအဖွဈ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုနတေဲ့ အသကျ၂၁ နှဈအရှယျရှိ Laura Mundy ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးလေးဟာ အပွဈဆိုစရာမရှိအောငျ လှပတာကွောငျ့ ကိုယျနဲ့အဆငျပွတေဲ့ ခဈြသူမြိုးကိုရှာလို့ရတဲ့ Application ဖွဈတဲ့ Tinder Dating App က Laura ရဲ့Tinder အကောငျ့ကို ဖကျြပဈခဲ့တယျလို့ ဆိုလာပါတယျ။
Laura Munndy ဟာ သူမရဲ့အကွိုကျနဲ့ကိုကျညီပွီး သူမကိုနှေးထှေးမှုအပွညျ့အဝပေးနိုငျတဲ့ လကျတှဲဖျောကို ရှာဖှနေိုငျရနျအတှကျ ယူရို ၇.၉၉ ကို Tinder Dating App မှာ လစဉျပေးသှငျးခဲ့ရပါတယျ။ Laura ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ Tinder Dating App မှာ သူမရဲ့ဓါတျပုံတှတေငျတိုငျး သူ့ရဲ့ဓါတျပုံတှကေိုမွငျတဲ့ Tinder Dating App ကို အသုံးပွုသူအမြိုးသားတှကေတော့ Laura ဟာ အမှနျတကယျလူသားဖွဈကွောငျးကို လကျခံရခကျခဲကွောငျး မှတျခကျြပေးပွောဆိုကွပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Tinder Dating Appကို အသုံးပွုသူအမြိုးသမီးအခြို့ကလညျး Laura ဟာ မငျးသမီးတဈယောကျ ဒါမှမဟုတျ မျောဒယျတဈယောကျရဲ့ပုံကို အသုံးပွုထားတဲ့ လူလိမျမလို့ စှပျစှဲပွောဆိုခံခဲ့ရတာမြိုးလညျးရှိကွောငျး Laura က ဖှငျ့ဟပွောဆိုလာပါတယျ။
Laura က “ကြှနျမရဲ့သူငယျခငျြးတှကေလညျး Tinder Dating App ကို အသုံးပွုရငျ သူတို့ရဲ့လကျတှဲဖျောကို ရှာတှခေဲ့တာကွောငျ့ ကြှနျမကလညျး ကြှနျမရဲ့လကျတှဲဖျောကိုမြား တှရှေိ့နိုငျမလားဆိုတဲ့ အထငျနဲ့ Tinder Dating App ကို အသုံးပွုခဲ့တာပါ။ ကြှနျမရဲ့ဓာတျပုံတှကေို တငျတဲ့အခါမှာလညျး လူတှကေ ကြှနျမက အစဈအမှနျမှဟုတျရဲ့လား? ဒါမှမဟုတျ မျောဒယျတဈယောကျပုံယူသုံးထားတာလား? ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှမေေးတာမြိုး ကွုံခဲ့ရဖူးပါတယျ။ တဈရကျမှာတော့ ကြှနျမရဲ့ Tinder အကောငျ့ကို ဝငျကွညျ့တဲ့အခါမှာ Tinder App ကနပွေီးတော့ ကြှနျမဟာ Tinder က ခမြှတျထားတဲ့စညျးမဉျြးတှကေို နားမလညျတာကွောငျ့ (သို့) ခြိုးဖောကျနတောကွောငျ့ ကြှနျမရဲ့ Tinder အကောငျ့ကို ဖကျြသိမျးကွောငျး အသိပေးစာကို လကျခံရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကြှနျမက အရမျးလှနတောမို့ Tinder Dating App ကုမ်ပဏီမှ တာဝနျရှိသူတှကေ ကြှနျမရဲ့ အကောငျ့ကို ဖကျြသိမျးခဲ့တာဖွဈနိုငျမလားလို့ ထငျခဲ့ပါတယျ။” လို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Laura ဟာ သူမရဲ့အပွဈပွောစရာမရှိတဲ့ အလှကွောငျ့ ခြီးမှမျးစကားတှေ ၊ အပွဈတငျဝဖေနျတာတှကေို Tinder Dating App ကို အသုံးပွုသူတှဆေီကနပေဲ ကွားရတာမဟုတျပါဘူး။ သူမရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့ကနလေညျး အဆိုပါ ခြီးမှမျးစကားတှေ ၊ အပွဈဝဖေနျတာတှကေို ခံနရေကွောငျးကိုလညျး မြှဝပွေောပွခဲ့ပါသေးတယျ။
Tinder Dating App ကနေ အကောင့်ဖယ်ရှားခံရတဲ့ အသက်၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေတဲ့ အသက်၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ Laura Mundy ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေးဟာ အပြစ်ဆိုစရာမရှိအောင် လှပတာကြောင့် ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ ချစ်သူမျိုးကိုရှာလို့ရတဲ့ Application ဖြစ်တဲ့ Tinder Dating App က Laura ရဲ့Tinder အကောင့်ကို ဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။
Laura Munndy ဟာ သူမရဲ့အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီပြီး သူမကိုနွေးထွေးမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် ယူရို ၇.၉၉ ကို Tinder Dating App မှာ လစဉ်ပေးသွင်းခဲ့ရပါတယ်။ Laura ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ Tinder Dating App မှာ သူမရဲ့ဓါတ်ပုံတွေတင်တိုင်း သူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမြင်တဲ့ Tinder Dating App ကို အသုံးပြုသူအမျိုးသားတွေကတော့ Laura ဟာ အမှန်တကယ်လူသားဖြစ်ကြောင်းကို လက်ခံရခက်ခဲကြောင်း မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Tinder Dating Appကို အသုံးပြုသူအမျိုးသမီးအချို့ကလည်း Laura ဟာ မင်းသမီးတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို အသုံးပြုထားတဲ့ လူလိမ်မလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုခံခဲ့ရတာမျိုးလည်းရှိကြောင်း Laura က ဖွင့်ဟပြောဆိုလာပါတယ်။
Laura က “ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း Tinder Dating App ကို အသုံးပြုရင် သူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်မကလည်း ကျွန်မရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုများ တွေ့ရှိနိုင်မလားဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ Tinder Dating App ကို အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ ကျွန်မရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို တင်တဲ့အခါမှာလည်း လူတွေက ကျွန်မက အစစ်အမှန်မှဟုတ်ရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပုံယူသုံးထားတာလား? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေမေးတာမျိုး ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ Tinder အကောင့်ကို ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Tinder App ကနေပြီးတော့ ကျွန်မဟာ Tinder က ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကို နားမလည်တာကြောင့် (သို့) ချိုးဖောက်နေတာကြောင့် ကျွန်မရဲ့ Tinder အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း အသိပေးစာကို လက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မက အရမ်းလှနေတာမို့ Tinder Dating App ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတွေက ကျွန်မရဲ့ အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်နိုင်မလားလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Laura ဟာ သူမရဲ့အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ အလှကြောင့် ချီးမွမ်းစကားတွေ ၊ အပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေကို Tinder Dating App ကို အသုံးပြုသူတွေဆီကနေပဲ ကြားရတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကနေလည်း အဆိုပါ ချီးမွမ်းစကားတွေ ၊ အပြစ်ဝေဖန်တာတွေကို ခံနေရကြောင်းကိုလည်း မျှဝေပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
Previous လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျတဲ့ ကွျောငွာကွောငျ့ ပွညျသူလူထုကို ဝနျခတြောငျးပနျခဲ့ရတဲ့ မျောတျောကားကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
Next အဆီပိုတှရှေိခွငျးဟာ အလှပိုစတေယျလို့ ယူဆခဲ့တဲ့ ခတျေတဈခတျေ။